Ọkwa nke Ọdịnaya Ọdịnaya 2014 | Martech Zone
Youtụlela ihe ndị ọzọ na-ere ahịa dijitalụ na-arụ ma a bịa na atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya, gụnyere ịde blọgụ, mmepụta, ịkekọrịta, na mmesho? Yana Booklọ nyocha HQ, Oracle Eloqua egosiwo otu ndi ahia dijital na-azaghachi ihe a choro nke usoro ihe omuma na ihe omuma a.
Anyị gbalịrị ịkọwapụta ire ahịa ọdịnaya site na nghọta doro anya na usoro mgbasa ozi akwụpụtara, nke nwere, na nke akwụ ụgwọ- ihe atumatu ndị ahịa na-agbaso-yana otu esi edepụta ọdịnaya yana njem ndị na-azụ ahịa, yana usoro arụmọrụ dị mkpa.
Ihe zuru ezu Nkwupụta Ntụle Ọdịnaya Ọdịnaya gụnyere azịza sitere n'aka ndị ahịa 200 na ajụjụ ndị dị ka:
Kedụ ụdị ọdịnaya ndị ahịa ọgbara ọhụrụ na -emepụta, otu esi adị kwa oge na maka ebumnuche.
Kedu ka ndị ahịa nke oge a si eji ọdịnaya ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ isi nsogbu ndị na-eche ihu ahịa ọdịnaya nke oge a.
Ndị ahịa ọgbara ọhụụ na - akwado ọdịnaya na njem onye zụrụ ahịa.
Kedu ihe ndị ahịa nke oge a na-ejide na otu ha si enyocha irè ahịa ọdịnaya.
Trendszọ ndị bụ isi na-emetụta ọrụ ahịa ọdịnaya.
Tags: 2014ịde blọgụAkuko ahia ọdịnayammepụta ọdịnayaatụmatụ ọdịnayaụlọ ọrụ ịde blọgụokwuinfographicogba anya hqnyocha ahịaOracleokwu eloquaala nke ire ahịa ọdịnaya